Kuwadzana Nevamwe vaKristu Kunobatsira Sei Zvapupu zvaJehovha?
Kunyange tichifanira kufamba nemumasango kana kuti mumamiriro ekunze akashata, tinopinda misangano yedu yechiKristu nguva dzose. Pasinei nematambudziko eupenyu uye kuneta pashure pokushanda, nei isu Zvapupu zvaJehovha tichiedza chaizvo kuva pamwe chete nevatinonamata navo?
Kunotibatsira kuti tinzwe zvakanaka. Achitaura nezvevatinowadzana navo muungano, Pauro akanyora kuti, “Ngatirangarirane.” (VaHebheru 10:24) Mashoko aya anoreva “kunyatsofunga,” kureva kuti, kusvika pakuzivana. Saka mashoko emuapostora wacho anotikurudzira kuti tive nehanya nevamwe. Nokusvika pakuziva dzimwe nhengo dzeungano, tinoona kuti vamwe vavo vakabudirira pakukunda matambudziko akafanana needu uye vanogona kutibatsira kuti tibudirirewo.
Kunoita kuti pave noushamwari hwakasimba. Vatinoungana navo pamisangano yedu havasi vanhu vatinongozivanawo navo, asi iboka reshamwari dzepedyo. Pane zvimwe zviitiko, tinova nenguva yekutandara pamwe chete zvinozorodza. Kuwadzana kwakadaro kunobatsira sei? Kunoita kuti tiwedzere kukoshesana kwatinoita, uye izvozvo zvinosimbisa kudanana kwedu. Vamwe vedu pavanenge vachitarisana nematambudziko, tinobva takurumidza kuvabatsira nokuti tinenge taumba ushamwari hwakasimba. (Zvirevo 17:17) Nokuwadzana nevanhu vose vemuungano yedu, tinoratidza kuti ‘tinotarisirana zvakafanana.’—1 VaKorinde 12:25, 26.
Tinokukurudzira kuti usarudze vaya vanoita kuda kwaMwari kuti vave shamwari dzako. Uchawana shamwari dzakadaro pakati peZvapupu zvaJehovha. Tapota usarega chero chii zvacho chichikutadzisa kuwadzana nesu.
Nei zvakatinakira zvikuru kuti tiwadzane nevamwe pamisangano yechiKristu?
Ndirini paungada kuzivana nevanhu veungano yedu?